Fifa oo cusbooneysiisay ganaaxii Bin Hammam ka dib baaritaan. - Caasimada Online
Home Warar Fifa oo cusbooneysiisay ganaaxii Bin Hammam ka dib baaritaan.
Fifa oo cusbooneysiisay ganaaxii Bin Hammam ka dib baaritaan.
Bin Hammam oo horay Kubada cagta looga ganaaxnaa inta ka dhiman Nolashiisa markii ay Maxkamad ku heshay dambi ah inuu Laaluushay oo uu codad gatay bishii July, laakiin Fifa ayaa mar kale ganaax garka u gelisay.
Michael Garcia, oo ah gudiga baaritaankiisa loo xil saaray, ayaa talaadadii sii dhameystiray baaritaanada waxayna Dukumentiyadii u direen Hans-Joachim Eckert, oo ah maxada baaritaanada, Fifa ayaa tiri: “Madaxweynihii hore ee xiriirka kubada cagta Asia Bin Hammam waxaa la siiyey ilaa Janaayo dhexdeeda inuu uga soo jawaab bixiyo warbixinta Ganaaxa. Wuxuu qabay 45 cisho oo ganaax ah, oo ku eg Jimcada, waxaana loo kordhiyey ka dib markii lagu helay eedeymihii loo heystay.
Ka dib markii uu isku deyey inuu tartan la galo madaxweynaha Fifa Sepp Blatter sanadii hore, waxaa lagu eedeeyey inuu isticmaalay Laaluush iyo codad gadasho.
Bin Hammam ayaa laga ganaaxay inta ka dhiman noloashiisa ka dib markii lagu helay dambigaas.